I-China HP120 Amandla oMbane amaNqaku abandayo eOyile yoPapasho loMenzi kunye noMthengisi | Huipin
Igama lebrand: Huipin
Imveliso Isikhundla: 1 Ton ngeeyure ezingama-24
Uhlobo: Umatshini wokushicilela weoyile ebandayo
Isicelo: Cinezela ioyile ukuze utye ioyile
Imilinganiselo: 920 * 390 * 750 mm
I-GW / NW: I-150/130 ii-KGS
Olu shicilelo lweoyile luyimveliso yethu ephuculweyo, ikwangumatshini ophambili phakathi kwezixhobo zokuLungisa ioyile. Esi Cinezela seoyile sinesakhiwo esilula, ukusebenza okufanelekileyo, ukugcina amandla, ingxolo ephantsi, uphawu lokuziqhelanisa okuphezulu kunye nokuqina kunye nokusebenza okuqhubekayo, njl.njl. Iminquma, imbewu yekwai, ikhokhonathi, iioyile zezityalo zecacao ziyakhama, zisebenza kumzimveliso weoyile yokupheka encinci kunye nophakathi kunye nokusetyenziswa kobuchwephesha, nazo zinokusetyenziselwa ukucofa isutivings ye-leaching.
3) uxinzelelo oluphezulu crank kabini ukulawula ukuvulwa die kunye lokuvala.
I-4) Ukubaleka kukuzenzekelayo okuphezulu kunye nokuqonda, akukho kungcoliseka
5) Faka isicelo sokudibanisa ukunxibelelana nesixhobo sokuhambisa umoya, esinokuthi ngokuthe ngqo emgceni wokugcwalisa umatshini.
Igama: Umatshini wokucinezela weoyile
Iinjini ezidumileyo zasekhaya, amandla aqhubayo okuqhuba, amafutha asezantsi, izibonelelo zoqoqosho eziphezulu 12F + 4R sliding sleeve shift.
* Uphando kunye nenkxaso yokubonisana.
* Inkxaso yovavanyo lwesampulu.
* Jonga iFektri yethu.
* Uqeqesho lokufaka umatshini kumatshini wokufaka, uqeqesho ekusebenziseni umatshini.
* Iinjineli ziyafumaneka koomatshini benkonzo aphesheya.
Iphakheji eqhelekileyo yibhokisi yeplanga (Ubungakanani: L * W * H). Ukuba ukuthunyelwa kwamanye amazwe kumazwe aseYurophu, ibhokisi yeplanga iya kucinywa.Ukuba isikhongozeli sinobunzima kakhulu, siya kusebenzisa ifilimu ye-pe ukupakisha okanye ukuyipakisha ngokungqinelana nabathengi isicelo esikhethekileyo.
Igama leMveliso enekhonkco
91.8% Inqanaba lokuphendula
Egqithileyo I-HP 120 yeModeli yeCold Oil Press
Okulandelayo: Ioyile yesitovu esiphekiweyo seoyile kuMthengisi weoyile
Ioyile yesitovu esiphekiweyo seoyile kuMthengisi weoyile
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Imbewu yeNtengiso yeoyile, Umatshini wokushicilela ioyile, Umthengisi weoyile,